May Nyane: သမီးပျိုအမေရဲ့စာ (၂)
အင်း ဒီကလေးက ကိုယ် ချင်းမိုင်မှာ စတွေ့ဖူးတော့ ပီဘိ ကလေးလေး။ မနှစ်က ကိုယ် မေရီလင်းဒ်ရောက်တော့ စကောစက အရွယ်ကို ရောက်နေပြီ။ စကောစက ဆိုတာထက် ဆယ်ကျော်သက် နယ်ထဲ ၀င်ရောက်နေပြီပေ့ါ။ Physically Mentally အများကြီး ပြောင်းလည်းသွားပြီ။ ကိုယ့်သမီး တစ်ယောက်လို ပူပန်ခဲ့ပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ညီမကို သတိပေးဖို့ ဆွေးနွေးဖို့ အခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ခုလိုလေးတွေ ဖတ်ရတော့ ဒီ စာ ၂ ပုဒ်လုံးဟာ သူ့အပေါ် ကောင်းတဲ့ဖက်က အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်သွားတယ်။ ဒါတင်မက အခြားအခြားသော ညည်းလို အမေတွေ သူ့လို သမီးတွေအတွက် အရမ်းကို အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့လဲ တဆက်တည်း တွေးမိပါတယ်။ Cheers! ညီမ ရေ...
Insein Thu said...
Thanks for sharing ur experience Teacher ...